Pros and Cons of not having Sex - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လိငျမှုကိစ်စ မပွုခွငျးရဲ့ နောကျကှယျမှ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုးမြား
“ကမ်ဘာကွီး ဘယျက စ” ပါလိမျ့…
ဗွဟ်မာကွီးလေးဦး ၊ အာဒံ ဧဝ. အစရှိသဖွငျ့ ခုခြိနျထိ မရမေရာ ပွောကွမယျ…
ပွောခငျြတာကတော့ ကမ်ဘာကွီး ဘယျကစခဲ့လဲ မသိပမေယျ့.. ယခု ကမ်ဘာပျေါမှာ နထေိုငျတဲ့ လူသားတှကေတော့ မြိုးပှားခွငျးက ဖွဈပျေါလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ… မြိုးပှားဖို့ရာ ဖိုနဲ့မ ပေါငျးဆကျရတယျ… သုတျပိုးနဲ့ မမြိုးဥ ပေါ့… (ယခုခတျေပျေါ ဖနျပွှနျသန်ဓသေားဆိုတာလဲ သုတျပိုးနဲ့ မမြိုးဥက ဖွဈလာတာပါ) ဆိုတော့ကာ.. ရှငျးရှငျးပွောရရငျဖွငျ့ ဖိုနဲ့ မ လိငျဆကျဆံရာကနေ ကမ်ဘာကွီး လူဦးရေ တိုးပှားလာတယျ…. ဒါပွငျ လိငျဆကျဆံခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးတှကေိုလညျး ကနျြးမာရေး ဗဟုသုတ အဖွဈ တျောတျောမြားမြား သိကွမှာပါ…
ဒါဆို..ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈတဲ့ လိငျ မဆကျဆံခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုးတှကေရော?
အစိုးမရတာကို” စိတျ ” လို့ ချေါသကဲ့လို … လူ့စိတျဆိုတာ.. တဈယောကျ တဈမြိုးရယျပါ.. ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျရဲ့ ဆန်ဒဟာလဲ အခြိနျနဲ့အမြှ ကှဲပွားနမှောပါ…လူအမြားကွီးကို အကဲခတျဖို့ရာ ပိုခကျတာမို့ ယဘေုယတြှနေို့ငျတဲ့ ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးလေးတှေ ပွောပွပါမယျ….
– လိငျဆကျဆံရာမှာ အကာအကှယျ မသုံးမိတာကွောငျ့ (သို့) တပါးသူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက ထှကျတဲ့ အကြိအခြှဲ၊သှေး စတာတှနေဲ့ ထိတှမေိ့လို့ ရောဂါ ကူးစကျခွငျးတှကေနေ ကငျးဝေးနိုငျပါတယျ…
– ခဈြသူရညျးစားတှဟော တခါတရံ လိငျဆကျဆံရာမှာ အကာအကှယျမသုံးတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျလှယျရခွငျး၊နောကျဆကျတှဲမှာ စီးပှားရေး လူမှုရေး ပွသနာ ကွုံရခွငျးတှနေိုငျပါတယျ… ဒါကွောငျ့ လိငျဆကျဆံတဲ့ အခါမှာ အကာအကှယျ သုံးဖို့ရာ(သို့) အသုံးမပွုခဲ့မိပါက အရေးပျေါသန်ဓတေားဆေးဖွငျ့ တားဆီးဖို့ရာ လိုအပျပါတယျ… ခဈြသူ၊ လငျမယားတှမှော လိငျဆကျဆံမှု နညျးတဲ့အခါမှာ ဒီလို ပွသနာတှကေ အနညျးငယျ ကငျးဝေးနိုငျပါတယျ
– ခဈြသူ၊လငျမယားတို့မှာ အကွောငျးတဈစုံတဈရာကွောငျ့ လိငျမဆကျဆံနိုငျပါကလညျး… တနညျးအားဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျခငျြး ခဈြခွငျးကို ဖလှယျတာထကျ…တဈဦးတဈယောကျရဲ့ စိတျကို ပိုနားလညျပေးပွီး sex ကိစ်စမဟုတျသော တခွား romantic ဆနျတဲ့ နညျးလမျးတှေ ပိုတှေးမိလာနိုငျတယျ..အခဈြမလြော့ပဲ ပိုတိုးလာနိုငျပါသေးတယျ(တယောကျကိုတယောကျ နားလညျဖို့ ပိုလိုအပျပါတယျ)
– မဇ်ဇိမ ပဋိပဍာ ဆိုသလို … ကာမအာရုံကို အရမျးစှဲလနျးတတျပါက မကောငျးပါဘူး.. ဒါကွောငျ့ မိမိဟာ လိငျကိစ်စကို သာမနျလောကျသာ စိတျဝငျစားတဲ့အခါ အခွားသော လူမှုရေး၊စီးပှားရေးနဲ့ အတှေး အချေါဘကျကို ပိုမို အခြိနျပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ…
– မွှတှေေ ငါးတှမှော ခွလေကျတှေ ပါခဲ့ဖူးတယျဆို.. သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ဆိုကွဖူးတယျ.. ဒါဆို ဘာလို့ ခုမရှိတော့လဲလို့ မေးကွမယျ… သဘာဝတရားကွီးက ဆနျးကွယျတယျ… အသုံးမပွု အသုံးမလိုတော့တဲ့ အရာ တဈခုဟာ တဖွညျးဖွညျး သိမျသှားပွီး ပြောကျကှယျသှားတယျတဲ့… မစိုးရိမျပါနဲ့.. ဒီလို ဖွဈဖို့ဆိုတာက ရာစုနှဈတျောတျောမြားမြားကွာမှ ဖွဈနိုငျတာပါ.. သိျု့သျော.. ကြှနျတေျာ့ကို “ဆရာ ကြှနျတျောသာ အသုံးမပွုတော့ရငျ သိမျသှားမှာလားလို့ မေးလာခဲ့ရငျတော့… အပျေါက မွှနေဲ့ ငါး ဥပမာလိုပဲ ဖွပေါရစေ”
-သုတတေနတှေ အဆိုအရ တဈပတျမှာ လေးငါးကွိမျလောကျ သုတျလှတျခွငျးဟာ ပရိစတိတျ(prostate)ကို ပုံမှနျဖွဈစပွေီး ကနျြးမာရေးကို မထိခိုကျနိုငျပါဘူး… ဒီလိုပဲ အမြိုးသမီးတှမှောဆိုရငျလဲ လိငျမဆကျဆံတာ ကွာလာတဲ့အခါ မိနျးမကိုယျကွှကျသား အားလြော့လာတတျပွီး သားအိမျကြှံကခြွငျး ဖွဈတတျပါတယျ…
– ဆား မပါတဲ့ ဟငျးဟာ ပေါ့ရှတျရှတျနိုငျတယျလို့ ပွောကွတယျ.. အဲ့စကားလိုပဲ… အိမျထောငျမှုတဈခုမှာလဲ ကာမသုခ ဆိုတဲ့ ဆားလေး လိုတတျပါတယျ… သို့မဟုတျပါက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ စိတျခငျြး ရငျးနှီးသငျ့သလောကျ မရငျးနှီးနိုငျပဲ အိမျထောငျမှု အဆငျမပွေ ဖွဈတတျပါတယျ…
-တခါတရံမှာ လူတဈယောကျဟာ ကာမဆန်ဒတှေ ရှိနပွေီး သိက်ခာ ၊ လူမှုရေး၊ တခွားအခွအေနေ တဈခုကွောငျ့ အလိုမပွညျ့တဲ့ အခါမြိုးမှာ မိမိကိုယျကို စိတျအလိုမကခြွငျး၊ ဒေါသ ထှကျလှယျခွငျး စတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ..
– ကာမစိတျ မြားလှနျးတာမြိုးကို လြော့ခဖြို့ရာ တရား ထိုငျခွငျး၊ တခွားသော မိမိ ဝါသနာ ပါရာ အလုပျမြားကို ပွုခွငျး အားဖွငျ့ လြော့ခနြိုငျပါတယျ…
အရာရာတိုငျးမှာ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုး ဒှနျတှဲလကျြရှိတာမို့… မိမိ စိတျကို အုပျစိုးနိုငျသော ကနျြးမာရေး အသိနဲ့ ပွညျ့စုံသူမြား ဖွဈကွပါစလေို့ တောငျးဆု မတ်ေတာပွုလကျြ….
လိင်​မှုကိစ္စ မပြုခြင်းရဲ့ ​နောက်​ကွယ်​မှ ​ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ
“ကမ္ဘာကြီး ဘယ်​က စ” ပါလိမ့်​…
ဗြဟ္မာကြီး​လေးဦး ၊ အာဒံ ဧဝ. အစရှိသဖြင့်​ ​ခုချိန်​ထိ မ​ရေမရာ ပြောကြမယ်​…
​ပြောချင်​တာက​တော့ ကမ္ဘာကြီး ဘယ်​ကစခဲ့လဲ မသိ​ပေမယ့်​.. ယခု ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ ​နေထိုင်​တဲ့ လူသား​တွေက​တော့ မျိုးပွားခြင်းက ဖြစ်​​ပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​… မျိုးပွားဖို့ရာ ဖိုနဲ့မ ​ပေါင်းဆက်​ရတယ်​… သုတ်​ပိုးနဲ့ မမျိုးဥ ​ပေါ့… (ယခု​ခေတ်​​ပေါ် ဖန်​ပြွန်​သ​​န္ဓေသားဆိုတာလဲ သုတ်​ပိုးနဲ့ မမျိုးဥက ဖြစ်​လာတာပါ) ဆို​တော့ကာ.. ရှင်းရှင်း​ပြောရရင်​ဖြင့်​ ဖိုနဲ့ မ လိင်​ဆက်​ဆံရာက​နေ ကမ္ဘာကြီး လူဦး​ရေ တိုးပွားလာတယ်​…. ဒါပြင်​ လိင်​ဆက်​ဆံခြင်းရဲ့ ​ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး​တွေကိုလည်း ကျန်းမာ​ရေး ဗဟုသုတ အဖြစ်​ ​တော်​​တော်​များများ သိကြမှာပါ…
ဒါဆို..ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ဖြစ်​တဲ့ လိင်​ မဆက်​ဆံခြင်းရဲ့ ​​ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး​တွေက​ရော?
အစိုးမရတာကို” စိတ်​ ” လို့ ​ခေါ်သကဲ့လို … လူ့စိတ်​ဆိုတာ.. ​တစ်​​ယောက်​ တစ်​မျိုးရယ်​ပါ.. ဒါ​ကြောင့်​ လူတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ဆန္ဒဟာလဲ အချိန်​နဲ့အမျှ ကွဲပြား​နေမှာပါ…လူအများကြီးကို အကဲခတ်​ဖို့ရာ ပိုခက်တာမို့ ​ယေဘုယျ​တွေ့နိုင်​တဲ့ ​ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး​လေး​တွေ ​ပြောပြပါမယ်​….
– လိင်​ဆက်​ဆံရာမှာ အကာအကွယ်​ မသုံးမိတာ​ကြောင့်​ (သို့) တပါးသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​က ထွက်​တဲ့ အကျိအချွဲ၊​သွေး စတာ​တွေနဲ့ ​ထိ​တွေ့မိလို့ ​ရောဂါ ကူးစက်​ခြင်း​တွေက​နေ ကင်း​ဝေးနိုင်​ပါတယ်​…
– ချစ်​သူရည်းစား​တွေဟာ တခါတရံ လိင်​ဆက်​ဆံရာမှာ အကာအကွယ်​မသုံးတာ​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​လွယ်​ရခြင်း၊​နောက်​ဆက်​တွဲမှာ စီးပွား​ရေး လူမှု​ရေး ပြသနာ ကြုံရခြင်း​တွေနိုင်​ပါတယ်​… ဒါ​ကြောင့်​ လိင်​ဆက်​ဆံတဲ့ အခါမှာ အကာအကွယ်​ သုံးဖို့ရာ(သို့) အသုံးမပြုခဲ့မိပါက အ​ရေး​ပေါ်သ​န္ဓေတား​ဆေးဖြင့်​ တားဆီးဖို့ရာ လိုအပ်​ပါတယ်​… ချစ်​သူ၊ လင်​မယား​တွေမှာ လိင်​ဆက်​ဆံမှု နည်းတဲ့အခါမှာ ဒီလို ပြသနာ​တွေက အနည်းငယ်​ ကင်း​ဝေးနိုင်​ပါတယ်​
– ချစ်​သူ၊လင်​မယားတို့မှာ အ​ကြောင်းတစ်​စုံတစ်​ရာ​ကြောင့်​ လိင်​မဆက်​ဆံနိုင်​​ပါကလည်း… တနည်းအားဖြင့်​ ခန္ဓာကိုယ်​ချင်း ချစ်​ခြင်းကို ဖလှယ်​တာထက်​…တစ်​ဦးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ စိတ်​ကို ပိုနားလည်​​ပေးပြီး sex ကိစ္စမဟုတ်​​သော တခြား romantic ဆန်​တဲ့ နည်းလမ်း​တွေ ပို​တွေးမိလာနိုင်​တယ်​..အချစ်​မ​လျော့ပဲ ပိုတိုးလာနိုင်​ပါ​သေးတယ်​(တ​ယောက်​ကိုတ​ယောက်​ နားလည်​ဖို့ ပိုလိုအပ်​ပါတယ်​)
– မဇ္ဇိမ ပဋိပဍာ ဆိုသလို … ကာမအာရုံကို အရမ်းစွဲလန်းတတ်​ပါက မ​ကောင်းပါဘူး.. ဒါ​ကြောင့်​ မိမိဟာ လိင်​ကိစ္စကို သာမန်​​လောက်​သာ စိတ်​ဝင်​စားတဲ့အခါ အခြား​သော လူမှု​ရေး၊စီးပွား​ရေးနဲ့ အ​တွေး အ​ခေါ်ဘက်​ကို ပိုမို အချိန်​​ပေးနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​…
– ​မြွေ​တွေ ငါး​တွေမှာ ​ခြေလက်​​တွေ ပါခဲ့ဖူးတယ်​ဆို.. သိပ္ပံပညာရှင်​​တွေ ဆိုကြဖူးတယ်​.. ဒါဆို ဘာလို့ ခုမရှိ​တော့လဲလို့ ​မေးကြမယ်​… သဘာဝတရားကြီးက ဆန်းကြယ်​တယ်​… အသုံးမပြု​ အသုံးမလို​တော့တဲ့ အရာ တစ်​ခုဟာ တဖြည်းဖြည်း သိမ်​သွားပြီး ​​ပျောက်​ကွယ်​သွားတယ်​တဲ့… မစိုးရိမ်​ပါနဲ့.. ဒီလို ဖြစ်​ဖို့ဆိုတာက​ ရာစုနှစ်​​တော်​​တော်​များများကြာမှ ဖြစ်​နိုင်​တာပါ.. သို့်​​သော်​.. ကျွန်​​တော့်​ကို “ဆရာ ကျွန်​​တော်​သာ အသုံးမပြု​တော့ရင်​ သိမ်​သွားမှာလားလို့ ​မေးလာခဲ့ရင်​​တော့… အ​ပေါ်က ​မြွေနဲ့ ငါး ဥပမာလိုပဲ ​ဖြေပါရ​စေ”
-သု​တေတန​တွေ အဆိုအရ တစ်​ပတ်​မှာ ​လေးငါးကြိမ်​​လောက်​ သုတ်​လွှတ်​ခြင်းဟာ ပရိစတိတ်​(prostate)ကို ပုံမှန်​ဖြစ်​​စေပြီး ကျန်းမာ​ရေးကို မထိခိုက်​နိုင်​ပါဘူး… ဒီလိုပဲ အမျိုးသမီး​တွေမှာဆိုရင်​လဲ လိင်​မဆက်​ဆံတာ ကြာလာတဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်​ကြွက်​သား အား​လျော့လာတတ်​ပြီး သားအိမ်​ကျွံကျခြင်း​ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…
– ဆား မပါတဲ့ ဟင်းဟာ ​ပေါ့ရွှတ်​ရွှတ်​နိုင်​တယ်​လို့ ​ပြောကြတယ်​.. အဲ့စကားလိုပဲ… အိမ်​​ထောင်​မှုတစ်​ခုမှာလဲ ကာမသုခ ဆိုတဲ့ ဆား​လေး​ လိုတတ်​ပါတယ်​… သို့မဟုတ်​ပါက တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​ စိတ်​ချင်း ရင်းနှီးသင့်​သ​လောက်​ မရင်းနှီးနိုင်​ပဲ အိမ်​​ထောင်​မှု အဆင်​မ​ပြေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…
-တခါတရံမှာ လူတစ်​​ယောက်​ဟာ ကာမဆန္ဒ​​တွေ ရှိ​နေပြီး သိက္ခာ ၊ လူမှု​ရေး၊ တခြားအ​ခြေအ​​နေ တစ်​ခု​ကြောင့်​ အလိုမပြည့်​တဲ့ အခါမျိုးမှာ မိမိကိုယ်​ကို စိတ်​အလိုမကျခြင်း၊ ​ဒေါသ ထွက်​လွယ်​ခြင်း စတာ​တွေ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​..
– ကာမစိတ်​ များလွန်းတာမျိုးကို​ ​လျော့ချဖို့ရာ တရား ထိုင်​ခြင်း၊ တခြား​သော မိမိ ဝါသနာ ပါရာ အလုပ်​များကို ပြုခြင်း အားဖြင့်​ ​လျော့ချနိုင်​ပါတယ်​…
အရာရာတိုင်းမှာ ​ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး ဒွန်​တွဲလျက်​ရှိတာမို့… မိမိ စိတ်​ကို အုပ်​စိုးနိုင်​​သော ကျန်းမာ​ရေး အသိနဲ့ ပြည့်​စုံသူများ ဖြစ်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု ​မေတ္တာပြုလျက်​….